Hunan Zhonggu Science and Technology Co., Ltd. dia orinasam-teknolojia avo lenta mampiditra R&D sy famokarana milina fivarotana, faharanitan-tsaina artifisialy, Internet of Things, serivisy rahona, angon-drakitra lehibe, fandoavam-bola amin'ny finday, rindrambaiko milina varotra ary fampivoarana ny fitaovana ary fanamboarana azy io. Izy io no mpamatsy vahaolana amin'ny orinasa O2O manerantany. Izy no mpisava lalana amin'ny Internet + varotra manompo tena + maodely hatrizay hatrizay eo ambanin'ny tontolon'ny tetikady rahona. Miaraka amin'ny tanjaky ny orinasa matanjaka sy ny haavo teknika, Zhonggu dia ampiasaina any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100.
ZOOMGU dia manana trano maherin'ny 200,000 metatra toradroa ankehitriny, ary manana fananana miorina maherin'ny 500 tapitrisa yuan ary fahaiza-mihetsika 300,000 XNUMX unit / taona. Amin'ny maha-mpanamboatra milina matihanina lehibe manerantany, dia manana i Zoomgu fitaovana metaly mahery vaika sy vokatra, ary ny tsipika famokarana maro dia miara-manamboatra. Izy io dia manana tsipika fandefasana automatique feno tontolo iainana, tsipika fivoriambe farany, tsipika fivorian'ny automatique U-shell ary tsipika fivoriambe mandeha ho azy. Tsipika famokarana vy, tsipika famolavolana tsindrona.